Faritra Menabe -Sif: betsaka ny olana momba ny fananan-tany | NewsMada
Faritra Menabe -Sif: betsaka ny olana momba ny fananan-tany
Tonga tany Morondava, renivohitry ny faritra Menabe ny volana aogositra teo, ny Sif (Sehatra iombonana ho an’ny fananan-tany), nampivory ireo solontenam-pokonolona avy any ambanivohitra maro, niaraka amin’ireo solontenan’ny ambaratongam-pahefana samihafa.
Nantsoin’ny Sif niaraka amin’ireo tantsaha ny sampandraharaha fananan-tany, ny fitsarana, ny mpitandro filaminana, ny distrika, ny kaominina, ary ny faritra. Betsaka ny olana momba ny fananan-tany any amin’ny faritra Menabe, miantraika amin’ireo tantsaha maro. Miteraka tsy fandriampahalemana izany, mamono antoka ireo mpamboly sy mpiompy maro, manapotika ny tontolo iainana, mahatonga ny hafa mitsoa-ponenana, sns. Tsy mampandroso ny toekarena raha fintinina. Manoloana izany, mila averina ny kolontsaina malagasy eo amin’ny fifanakalozan-kevitra, araka ny fanamarihan’ny Sif tamin’ireo mpivory.
Kolontsaina mahomby ny fifanakalozan-kevitra hisorohana ny ady sy ny tsy firaisankina. Misongadina ny fitiavan-tena amin’izany ady tany izany ka izay manam-bola ihany no manampatra fahefana, indrindra amin’ireo mponina any ambanivohitra. Nisaotra ny Sif ny Tranoben’ny tantsaha any Menabe noho ny fampahafantarana azy ireo zavatra maro, ohatra, ny tokony hanatonana ny Birao iombonana ho an’ny fananan-tany (Bif), hahazoana kara-tany. Tsindrin’ny Tranoben’ny tantsaha ny tsy tokony hanaovana an-jorom-bala ny vehivavy momba ny fananan-tany.
Vahaolana maromaro ny nampahalalana ny mpivory, toy ny tetikasa faritan’ny COI (Commission de l’océan Indien) hanolorana vadin’asa ho an’ireo mpanjono. Fantatra ny fahavoazana mahazo ireo mpanjono ireo noho ny rivotra mahery vaika mateti-pihavy any amin’iny morontsiraka iny (Tsioka atimo); vahaolana iray naroso koa ny fanofanana any ifotony ho fiarovana ny ala honko.
Mamokatra amin’ny sehatra maro, an-tanety sy an-dranomasina, ny any Menabe, raha voatandro ny tokony hohajaina rehetra amin’ny lafiny fambolena, fiompiana, jono, ary fizahantany. Hametraka tambajotra ho an’ny fifanakalozan-kevitra ny Sif, sy hampivory izany ny 27 septambra ho avy izao.